Dagaal xooggan oo ka dhacay Daynuunay, duleedka Baydhabo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Koonfur Galbeed / Dagaal xooggan oo ka dhacay Daynuunay, duleedka Baydhabo
Dagaal xooggan oo ka dhacay Daynuunay, duleedka Baydhabo
Dagaal khasaaro xooggan geystey ayaa ka dhacay deegaanka Daynuunaay ee duleedka magaalada Baydhabo, maalintii shalay ee Axadda. Dagaalka ayaa u dhexeeyey ciidamada Dowaldda Federaalka iyo Malayshiyaadka al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Xoogga dalka ayaa Warbaahinta SONNA u sheegtey in ciidanka Dowladda ay heegan ku jireen taasina ay suurta galisay in si deg-deg ah looga hortago weerarkii ay soo qaadeen maleeshiyaadka al-Shabaab.
Afhayeenka u hadley Ciidanka Dwladda ayaa sheegtey in ay dhimasho badan u geystey Malayshiyaadkii soo weeraray ee al-Shabaab.
Dhanka kale warbaahinta ku hadasha afka a-Shabaab ayaa sheegtey in ururka al-Shabaab ay weerar ku qaadee xero ciidan oo ku taala Daynuunaay 23 km u jirta xarunta Baay ee Baydhabo, waxaana ay sheegteen in ay dileen ugu yaraaan 5 askeri qaar kalena dhaawaceen, al-Shababa ayaa sheegtey in ay xerada qabsadeen, inkasta oo ciidanka DOwladdu ay beeniyeen oo sheegeen in diyaar loo ahaa taasna sababtey in jab xooggan ay gaarsiiyaan.